၂၀၂၀ LibreOffice Writer ကိုအခမဲ့နှင့်မွမ်းမံပြင်ဆင်နည်း - နည်းပညာလမ်းညွှန်များ | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Ignatius ခန်းမ | | လည်ပတ်မှုစနစ်များ, Windows ကို
အင်တာနက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းအပြင်၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုရေးသားသောအခါ Windows သည်ကျွန်ုပ်တို့အား WordPad ဟုခေါ်ဆိုသည်။ အလွန်ကန့်သတ်စကားလုံး processor ကိုစာသားများကို format လုပ်ခြင်း၊ ရုပ်ပုံများနှင့်အရာဝတ္ထုများကိုထည့်ခြင်း၊ စာရင်းများဖန်တီးခြင်း၊ စကားလုံးများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဇယားများ၊ နံပါတ်စာမျက်နှာများကိုဖန်တီးချင်လျှင်၊ ခေါင်းစီးသို့မဟုတ်အောက်ခြေကိုထည့်ပါ၊ မျဉ်းကြောင်းအကွာအဝေးကိုပြုပြင်ပါ၊ စာသားနေရာချပါ၊ အထူးအက္ခရာများကိုသုံးပါ၊ ပုံစံများကိုဖန်တီးပါ၊ စိတ်ထဲပေါ်လာသည့်ပထမဆုံးဖြေရှင်းချက်မှာ Microsoft Word ဖြစ်သည်လစဉ်လတိုင်းပေးချေရန်လိုအပ်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း။
အကယ်၍ သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုသင်၏ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းသည်စာရွက်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်တီးရန်အလွန်အသုံးမကျပါကသိသာထင်ရှားပါသည် သင်သည် Office 365 subscription အတွက်ပေးဆောင်ရန်စိတ်မဝင်စားပါ Microsoft ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ LibreOffice Writer သည်ကျွန်ုပ်တို့အားတူညီသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများပေးသော်လည်းလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
1 LibreOffice ဆိုတာဘာလဲ
2 LibreOffice မှာဘာတွေပါလဲ
2.7 LibreOffice အတွက်တင်းပလိတ်များ
3 LibreOffice Writer ကို download လုပ်နည်း
4 LibreOffice လိုအပ်ချက်များ
5 iOS နှင့် Android အတွက် LibreOffice Writer ကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
LibreOffice သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အသုံးအဆောင်များနှင့်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သည် စာရွက်စာတမ်းမဆိုအမျိုးအစားကိုဖန်တီးပါစာရွက်စာတမ်းမှတ်တမ်းမှဒေတာဘေ့စ်အထိ၊ စာရင်းဇယားများ၊ တင်ဆက်မှုများ၊
Open source application များကိုအခမဲ့ဖြန့်ဝေရန်ရည်ရွယ်ထားသည် သူတို့ပေးသောလက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးများကို အခြေခံ၍ သူတို့၏အခြေခံမူများကိုအခြေပြုသည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအထက်။ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အသုံးချပရိုဂရမ်များစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် LibreOffice နှင့် Office အတွက်အစားထိုးရုံသာမက၊ VLC ပါသောမည်သည့်ဗီဒီယိုဖွင့်စက်မဆို GIMP နှင့်အတူ Photoshop ကိုလည်းရှာဖွေနိုင်သည်။
LibreOffice အပလီကေးရှင်းများတွင် -
Writer ဟာစိတ်ကူးကောင်းတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာဘယ် document အမျိုးအစားကိုမဆိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ် မနာလိုရန်အနည်းငယ်သာရှိပါတယ် Microsoft ကကျွန်တော်တို့ကို Word နှင့်ကမ်းလှမ်းသောဖြေရှင်းချက်ကိုရန်။ ဤလျှောက်လွှာဖြင့်မည်သည့်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးနိုင်သည်၊ ၎င်းတွင် Word ဖြင့်ဖွင့်နိုင်ရန် .docx format သို့တင်ပို့နိုင်သည်။
Excel သည်စာရင်းဇယားများ၊ စည်းနှောင်မှု၊ မလိုအပ်သောဖော်မြူလာများ၊ စာရင်းစစ်များပြုလုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင် Excel တွင်သင်မည်သည့်ရွေးစရာကိုမဆိုသင်ရှာဖွေချင်သည်ဖြစ်စေရွေးချယ်သည်။ ကျွန်တော် Calc နှင့်အတူဖန်တီးစာရွက်စာတမ်းများ သူတို့ကို Excel .xlsx format နဲ့သိမ်းနိုင်ပါတယ်။
အိမ်သုံးအသုံးပြုသူများအတွက် Calc သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်မြူလာမဆိုအမျိုးအစားလုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ LibreOffice သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်တီးရန်သုံးနိုင်သောတင်းပလိတ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။
Impress သည် Office Powerpoint ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည့် application တစ်ခုဖြစ်သည် အံ့မခန်းတင်ပြချက်များ ငါတို့အနည်းငယ်သည်းခံခြင်းနှင့်အချိန်ရှိပါက။ Impress ဖြင့်ဖန်တီးထားသောမှတ်တမ်းများကို Powerpoint .pptx format ဖြင့်သိမ်းနိုင်သည်။
Windows 10 ရှိ Paint သည်၎င်းကို Draw ဟုခေါ်သည် Paint နှင့်ဆင်တူသည် application များ၏ LibreOffice အစုံနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။
LibreOffice သည်သင်္ချာဆိုင်ရာဖော်မြူလာများကို Excel တွင်သာမက ASCII အက္ခရာများကို အသုံးပြု၍ Word တွင်ရရှိနိုင်သော Calc နှင့်ခွဲခြားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒီလျှောက်လွှာကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် ဘုံသင်္ချာသင်္ကေတကိုသုံးပါ ထိုကဲ့သို့သော sine, arcsine, cosine, arccosine, တန်းဂျ, arctangent, စတုရန်းသို့မဟုတ်ကုဗအမြစ်, သာ။ ကြီးမြတ်ညီမျှ, လျော့နည်း, အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းကန့်သတ် ...
Access, Excel ကဲ့သို့သူတို့၏လယ်ပြင်၌ရှိသောရှငျဘုရငျတို့ဖြစ်ကြသည်။ Database များအနေနှင့် LibreOffice သည် Base ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မှများစွာအကျိုးကျေးဇူးယူနိုင်သည် ဖော်မြူလာများစွာသည် Access ရှိသူများနှင့်တူညီသည်သို့မဟုတ်အလွန်ဆင်တူသည်.
LibreOffice မည်သည့် template ကိုမပါဝင်ပါဘူး ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှသင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအတင်းအကျပ်ပို့ဆောင်သည့်လျှောက်လွှာတွင်ပါရှိသည် အားလုံး applications များအတွက်တင်းပလိတ်များရှာပါ applications များ၏ဤအစုအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
LibreOffice Writer ကို download လုပ်နည်း
Writer ကို LibreOffice မှအတူတကွရရှိနိုင်သည်၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အတွက်ဤအရာများအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတွန်းအားပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်လိုသောမည်သည့် application ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုထားသည့်အခြား application များနှင့်မတူပါက၊ ဤ option ကိုမရပါ။
LibreOffice ကို Windows, Mac နှင့် Linux အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်၊ ၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတိုက်ရိုက် download လုပ်ပါ, ဒါ တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတားဆီး ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်မှအပလီကေးရှင်းတစ်ခုထပ်မံချန်ထားနိုင်သည်။
Office နှင့်မတူသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် LibreOffice ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်လိုအပ်ချက်များမှာအတော်လေးနိမ့်သည်။ အနည်းဆုံး LibreOffice လိုအပ်သည် Windows7SP1, Pentium III ပရိုဆက်ဆာ, 256 MB RAM, 1,5 GB hard disk space နှင့်အနည်းဆုံး resolution 1024 × 768 ဖြစ်သည်။
iOS နှင့် Android အတွက် LibreOffice Writer ကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် Writer၊ Calc နှင့် Impress ဖိုင်များကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည့် application ကိုရှာနေလျှင်၊ ကျနော်တို့ပြaနာတစ်ခုသို့ပွေးလေ၏၎င်းသည်ပုံမှန် format ဖြစ်သောကြောင့် App Store နှင့် Play Store နှစ်ခုစလုံးတွင်ရရှိနိုင်သည့်မည်သည့်အခမဲ့အယ်ဒီတာနှင့်မကိုက်ညီပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် LibreOffice နှင့်စာရွက်စာတမ်းများဖန်တီးသောအခါ Office formats (docx, .xlsx နှင့် .pptx) ကိုအသုံးပြုသောအခါ လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များအတွက်လက်ရှိရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက် ရုံးခန်းပဲ။
Microsoft ၏ရုံးသည် Word, Excel နှင့် PowerPoint အတွက်ရိုးရှင်းသောအယ်ဒီတာ ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောအယ်ဒီတာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောသောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဂေဟစနစ်နှစ်ခုလုံးမှရရှိနိုင်သောလွတ်လပ်သောအပလီကေးရှင်းများမှလစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းအတွက်ငွေပေးချေရန်လိုအပ်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
Microsoft Office- တည်းဖြတ်ပြီး မျှဝေပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » Windows ကို » LibreOffice Writer ကို ၂၀၂၀ အခမဲ့ရယူပြီးမွမ်းမံနည်း
Muchas gracias ။ ? Como puedo iniciar sesion?
အားကောင်းတဲ့စကားဝှက်များ - သင်လိုက်နာသင့်တဲ့အကြံပြုချက်များ